छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला….. – Highlights Tourism
1 day ago फुटेको हिमतालको अझै भएन स्थलगत अध्ययन
2 days ago लामो दुरीको सवारी र उडान भदौ १५ सम्म बन्द
2 days ago कविशिरोमणि सङ्ग्रहालयमा कोरोनाको प्रभाव
2 days ago इन्द्रजात्राको इन्द्रध्वजोत्थान भदौ १४ गते
2 days ago तिलिचोसम्म साइकल सरर….
3 days ago बागलुङको नयाँ गन्तव्य ‘बुद्ध हिल’
3 days ago नवलपरासीका घरबास खुल्दै
3 days ago खुले होटल , आएनन् ग्राहक
5 days ago अस्पष्ट सरकारी नीतिले समस्या: सरिता लामा, महासचिव–टान
5 days ago चाडपर्व एकै घरपरिवारमा मनाउनु पर्ने
6 days ago पञ्चासेलाई पर्यटन केन्द्र बनाउन सरोकारवालाहरु एकमत
6 days ago अयोध्यापुरी राम जन्मभूमि प्रमाणित होला?
6 days ago रानीपोखरी भर्न आकाशे पानीको प्रयोग
1 week ago लेक घुम्टे पुग्न नयाँ पदमार्ग
1 week ago मनाइयो गाइजात्रा
1 week ago दैनिक ४८ आन्तरिक उडानलाई अनुमति
1 week ago आकाशसँगै खुलेका हिमाल
1 week ago विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा बस्ने वातावरण मिलाउन आग्रह
1 week ago धामीलाई देउता चढेपछि…….
1 week ago पाँचथरको मृदुङ्गा झरनाको आकर्षण
1 week ago घलेगाउँका घरबास भदौ १ देखि खुल्ने
छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला…..
काठमाडौं । माना रोपेर मुरी फलाउने भनेर चिनिएको असरको मध्यलाई नेपालीहरुले उत्सवको रुपमा मनाउने गरेको छ । सरकारले धान दिवसको रुपमा घोषणा गर्नु अघि नै नेपालीहरुले यसदिन दही च्युरा खाएर धान रोप्ने गर्दथे । यही दिन नेपालमा रहेका कतिपय विदेशी पर्यटकहरु रोपाइस्थलमा हिलो खेल्न पुग्थे । तर यस वर्ष कोरोनाका कारण विदेशी पर्यटक नभएको र आन्तरिक रुपमा पनि कार्यक्रम गर्न नसकिने अवस्थामा उत्सवको रुप लिन सकेको छैन ।
सत्रौँ राष्ट्रिय धान दिवसका दिन सोमबार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्थानीय किसान रोपाइँमा व्यस्त । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि उहाँहरुलाई साथ दिन पुगेका छन । तस्वीर सौजन्यः विपी गौतम/रासस
विसं २०६१ मङ्सिर २९ गते भने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी २०६२ असार १५ गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो । त्यसपछि भने राजनीतिक तहमा पनि यसप्रति चासो बढ्न थाल्यो । कृषि मन्त्री तथा अन्य नेता/जनप्रतिनिधिहरु पनि यस दिन धान रोपाइमा सामेल भएर हिलो खेल्ने गरेका छन् ।
किसान वर्षभरका लागि छाक जुटाउन यो महिना खेतीमा व्यस्त हुन्छन् । असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपुछुपु हिलोमा धान रोपिन्छ । ‘छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौँला’ जस्ता लोक लयका गीत गाएर खेतमै रमाइलो पनि गरिन्छ ।
कोदालीबाट खेत सम्याउँदै किसान । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ/रासस
सत्रौं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा सोमबार तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ जामुनेस्थित खेतमा धान रोप्दै किसान । जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा रोपाइँ शुरु भएको छ भने केही ठाउँमा चैते धान थन्क्याएपछि मात्र धान रोप्ने तयारीमा कृषक छन । तस्वीर: कृष्ण न्यौपाने/रासस ।
दही वैज्ञानिक दृष्टिले पनि स्वास्थ्यवर्द्धक मानिन्छ । आयुर्वेदमा भोजनको अन्त्यमा दही मथेर बनाएको मोही पिएमा औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीकहाँ जानु नपर्ने बताइएको छ । दहीले पाचन शक्ति पनि बढाउँछ ।
ललितपुरमा मेशिनको सहायताले धान रोपिँदै । तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ/रासस
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ का महिला धान रोप्न बीउ काढदै । समयमै बर्षा हुँदा धान रोपाइँ कार्य कञ्चनपुरमा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । तस्वीर: राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम १७ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सवका अवसरमा सोमबार ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित आफ्नो निवास नजिकै खेतमा धान रोप्न हातमा बीउ लिँदै । साथमा उहाँकी धर्मपत्नी तुलसा थापा लगायत । तस्विर: उपाध्यक्ष गौतमको निजी सचिवालय
सत्रौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा सोमबार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१३, बेहर्डवाको ९६ बिघा चाक्लाबन्दी जमिनमा धान रोप्दै रोपार । तस्बिरः हरिकुमार राई/रासस
Previous article संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा पुरस्कार घोषणा
Next article कास्कीको आठ ताल मध्येको न्युरेनी ताल
मान रोपेर मुरी फलाउने चटारो
फुटेको हिमतालको अझै भएन स्थलगत अध्ययन
इन्द्रजात्राको इन्द्रध्वजोत्थान भदौ १४ गते
तिलिचोसम्म साइकल सरर….
सोलुखुम्बु । सोलुखोलामा पानीको बहाव बढेको पाँच दिन बितिसक्दासमेत प्रशासन कार्यालयले आधिकार…
सोलुखुम्बु । सोलुखोलामा पानीको बहाव बढेको पाँच दिन बितिसक्दासमेत प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक पुष्टि नगरेपछि …